मिहेनत गर्नेहरुको लागि अष्ट्रेलिया उर्बर भूमी हो –रञ्जित शाह,प्रबन्ध निर्देशक,रामा फ्यासिलिटि म्यानेजम्यान्ट प्रा.लि. - Onlinesamaya.com
मिहेनत गर्नेहरुको लागि अष्ट्रेलिया उर्बर भूमी हो –रञ्जित शाह,प्रबन्ध निर्देशक,रामा फ्यासिलिटि म्यानेजम्यान्ट प्रा.लि.
सिड्नी । नेपालको रौतहट जिल्लामा जन्मीएका र करीव १० बर्ष चितवनमा बिताएका ३६ बर्षिय रञ्जित शाह अध्ययनका लागि एक दशक अघि अष्ट्रेलिया प्रबेश गरेका थिए । प्रारम्भमा जे गरेर भएपनि अष्ट्रेलीयामा टिक्नु पर्छ भन्ने मनशायकासाथ आफ्नो काम शुरु गरेका रञ्जितले सन् २०१५ मा रामा फ्यासिलीटी म्यानेजम्यान्ट प्रालि कम्पनी शुरु गरे । नेपाल तथा बिश्वका बिभिन्न मुलुकहरुवाट अध्ययनका शिलशिलामा यहाँ आएका विद्यार्थीहरुलाई सजिलै काम प्राप्त होस् र उनिहरुले आफ्नो अध्ययन सँगसँगै यहाँ बस्नका लागि पनि सहज होस् भन्नका लागि सानो स्केलमा ब्यवसाय शुरु गरेका रञ्जितले हालका दिनसम्म आईपुग्दा करीव २ सय जनालाई काम दिईरहेका छन् । क्लिीनिङ्ग क्षेत्रमा राम्रो स्कोप देखेका रञ्जितले त्यही क्षेत्रमा रामा फ्यासिलिटि म्यानेजम्यान्ट प्रालि मार्फत काम गरीरहेका छन् । रञ्जितले केवल अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा मात्रै नभएर रामा फ्यासिलिटि प्रालि मार्फत नेपालमै ब्यावसाय संचालन गर्ने तयारीमा जुटेका छन् । अष्ट्रृेलियामा मिहेनत गरेर अघि बढ्ने हो भने निकै सम्भावना रहेको बताउने ,रामा फ्यासिलिटि म्यानेजम्यान्ट प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक रञ्जित शाहसँग अनलाईनसमय डटकमले गरेको कुराकानी ।
अहिले केमा ब्यस्त हुनुहुन्छ ?
मेरो अष्ट्रेलियाको पारामाटामा रामा फ्यासिलिटि म्यानेजम्यान्ट प्रालि रहेको छ । यसले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीहरुदेखि लिएर कामको खोजीमा रहेकाहरुलाई सजिलै काम प्रदान गर्दछ । त्यसरी नै यस कम्पनी मार्फत हामीले काम खोज्न आउनेहरुलाई क्लिनिङ्ग सम्वन्धी काम, उचित परामर्श, विद्यार्थीह्रुका लागि कोठा भाडा,गाडी चलाउन सिकाउने लगायतका कुराहरु तथा सहयोग गरीरहेका छौं ।
दिनचर्या कस्तो चलिरहेको छ ? सधै फोनमै झुम्मीरहेको देख्छु ?
हो हेर्नुस् न बिहानदेखि अहिलेसम्म फोन बजेको बज्यै छ । यहाँले देखिनै रहनु भएको छ । मेरो दिनचर्या भनेकै हामीले काम गरीरहेका सिड्नीका बिभिन्न क्षेत्र तथा स्थानहरुमा के कस्तो काम भईरहेको छ, हाम्रो कामप्रतिको सन्तुष्टी कस्तो छ ,हाम्रा साथीहरुले के–कसरी काम गरीरहनु भएको छ, उहाँहरुको अवस्था तथा उहाँहरुको कामको बारेमा बिहानै जानकारी लिने गर्दर्छु । त्यसरी नै कसैलाई केही समस्या भएको अवस्थामा म आफै त्यही स्थानमा पुगेर उनिहरुलाई सघाउ पुग्ने का मगर्दै आईरहेको छु । त्यसरी नै फोनमा समेत हाम्रा कर्मचारी तथा सहकर्मीहरुले के कसरी काम गरीरहेका छन् भन्ने बारेमा निरन्तर रुपमा अपडेट लिने काम गर्ने गर्दर्छु । त्यती मात्रै होईन, कामका लागि आईपर्ने समस्याहरुलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने बिषयमा निरन्तर क्लाईन्टसँगको सम्वन्वय सहकार्य र आपसी सरसल्लाहमा कामहरु अघि बढाईरहेका छौं । अब फोनको कुरा गर्नु पर्दा यही फोनकै भरमा मैले सबै कर्मचारीदेखि लिएर काममा गएका साथीहरुसँग सम्पर्क गर्ने भएकाले मात्रै ब्यस्थ भएको देखिन्छ ।
तपाईको अष्ट्रेलिया अनुभव बताई दिनुस् न ?
सन् २००८ को डिसेम्बरमा म अष्ट्रलिया आएको हुँ । साथीभाईहरुको सहयोगमा यहाँ केही कामहरु गर्न थाले । त्यो बेला बिश्वमा नै कामको निकै संकटको अवस्था थियो । त्यस्तो अवस्थामा मैले काम पाउँदा म निकै खुशी भएँ । मैले पहिलो दिन काम सिड्नीवाट करीव ६० किलोमिटर टाढा क्यामदेनमा रेष्टुरेन्ट क्लिनिङ्गको पाएको थिए । जहाँपुग्न १३ डलर भाडा लाग्थ्यो भने मैले दिनभर काम गरेको ४७ डलर पाएको थिए । तर त्यही काम र त्यही ४७ डलर नै मेरो लाईफको टर्निङ्ग प्वाईन्टका रुपमा रह्यो । मैले त्यस पछि निरन्तर रुपमा क्लिनिङ्गको कामहरु गर्दै गएँ । मलाई यति भनिरहँदा गर्भ महशुष हुन्छ कि, अरुले ११ बर्षमा थुप्रै विश्वविद्यालयका डिग्री लिए होलान् तर मैले क्लिनिङ्ग सेक्टरमा पिएचडी गरेको जस्तो महशुष हुन्छ । हालका दिनसम्म पनि सो रेष्टुरेन्ट मैले संचालन गरीरहेको कम्पनी मातहतवाट सेवा लिईरहेको छ र मैले सेवा प्रदान गरी नै रहेको छु । सन् २०१५ मा आएर मैले अब आफुले मात्रै काम गरेर हुदैन अरु साथीहरुलाई र नेपालवाट आएका विद्यार्थीह्रुलाई पनि काम दिनु पर्छ भन्ने मनशायकासाथ रामा फ्यासिलिटि प्रालि संचालन गरीरहेको छु र हालका दिनमा आईपुग्दा हाम्रो कम्पनीमा करीव २ सयको हाराहारीमा साथीहरु काम गरीरहेका छन् । यो नै मैले मेरो सफलता मानेको छु भने सयौ विद्यार्थीहरुलाई यसरी काम लगाउन पाउँदा म निकै खुशी छु र आगामी दिनहरुमा समेत यो पेशामा दृढताकासाथ लागीरहने प्रतिबद्धता जनाउादँछु ।
अष्ट्रेलिया अध्ययन गर्न आईरहेका र आउन चाहने विद्यार्थीलाई यहाँको सुझाव के छ ?
सबैभन्दा पहिला त तपाईहरु अध्ययन गर्न आउनु भएको छ भने अध्ययनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुस् । अध्ययन सँगसँगै तपाई यहाँ बाँच्नका लागि पनि काम त गर्नेपर्छ । अर्को कुरा तपाई अष्ट्रेलिया अध्ययनका लागि आउँदै हुनुहुन्छ भने नेपालमै राम्रोसँग गाडी चलाउन सिकेर नेपाली लाईसेन्स लिएर आउनुस् । किनकि नेपाली लाईसेन्सले अष्ट्रेलियामा गाडी चलाउन पाईन्छ । गाडी चलाउन जान्यो र तपाईसँग गाडी छ भने यहाँ काम पाउन र गर्न निकै सजिलो हुन्छ । त्यसरी नै यहाँ अष्ट्रेलियामा केवल किताबी ज्ञान भन्दा पनि प्रयोगात्मक र ब्यवहारीक सिप हुनु जरुरी छ । सिप भयो भने तपाईले यहाँ काम सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ । त्यसैले म सबै विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुलाई के भन्न चहान्छु भने तपाई आफ्ना नानीबाबुहरुलाई अष्ट्रेलिया अध्ययनका लागि पठाउँदै हुनुहुन्छ भने केही सिप सिकाएर पठाउनुस् ।
अर्को कुरा यहाँ अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीह्रुले समेत के ध्यान दिनु जरुरी छ भने अष्ट्रेलियामा कुनै डलरको रुख छैन कि, यहाँ आउने बित्तिकै पैसा फलिहाल्छ, त्यसैले तपाईहरु जहाँ जे पढ्न आउँदै हुनुहुन्छ, कम्तीमा एक बर्षको फि नेपनलवाटै तिरेर आउनुस्, त्यसले तपाईलाई यहाँ काम गर्न तथा अध्ययन गर्न निकै सजिलो हुनेछ । नत्र भने तपाईलाई निकै आर्थिक समस्या पर्न सक्दछ । किनकी यहाँ भन्ने बित्तिकै काम पाउन त्यती सजिलो छँदै छैन ।
अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा यहाँले थुप्रै विद्यार्थीहरुलाई काम दिईरहनु भएको छ ? उनिहरुसँगको काम गराईकोे सुझाव कस्तो रहेको छ ?
जनकजी, तपाईले निकै रमाईलो प्रश्न गर्नुभयो,यहाँ अध्ययन गर्न आएका जति पनि विद्यार्थीहरु छन् । सबै नयाँ हुन्छन् । उनिहरुलाई यहाँको अवस्थाका बारेमा र कामको बारेमा खासै जानकारी हुदैन । हाम्रोमा त्यस्ता थुप्रै विद्यार्थीहरु आउँछन् । हामीले उनिहरुलाई काम सिकाएर काम पनि दिन्छौं । त्यती मात्रै होईन, हामीले नयाँ विद्यार्थीहरुलाई कसरी यहाँ कोठा लिने, कसरी बस्ने, कसरी काम खोज्ने, कसरी काम दिने र के काम गर्दा कस्तो हुन्छ , अष्ट्रेलियामा कसरी सफल जिवन बिताउन सकिन्छ भनेर पूर्ण रुपमा काउन्सिलिङ्ग गर्ने गर्दछौं । अब प्रसंग रह्यो, नेपाली विद्यार्थीहरुले कस्तो परफमेन्स गरीरहेका छन् भने यहाँ आएका र काम गरीरहेका जति पनि विद्यार्थीहरु छन् उनिहरुले निकै राम्रो परफमेन्स गरीरहेका छन् । उनिहरुको काम देखि सबै जना निकै खुशी छन् । नेपालीहरुले अरुलेभन्दा बढी मिहेनत गर्ने भएकाले पनि यहाँ निकै सफल भएर उद्यमी बनीरहेको मैले देखेको छु ।
नेपालमा अझै पनि सबल दक्ष र सक्षम जनशक्ति पाउन निकै गाहे छ ? तर तपाईले संचालन गरीरहनु भएको ब्यवसायमा थुप्रै दक्ष जनशक्तिहरु काम गरीरहेका छन् । नेपाललाई सिपयुक्र जनशक्ति तयार पार्नका लागि के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ ?
हेर्नुस्,यो अष्ट्रेलियामा तपाईसँग सिप छैन र ब्यवहारीक ज्ञान छैन भने बाँच्न नै निकै कठीन हुन्छ । नेपालको शिक्षा नै बढी घोकन्ते र किताबी भएकाले पनि त्यहाँ बढी प्रयोगात्मक र सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादन हुन नसकेको मैले महशुष गरेको छु । तर पछिल्लो समयमा आएर नेपालमा पनि बिभिन्न प्राविधिक तथा ब्यावसायीक शिक्षण संस्थाहरु खुल्दै जानु, टेफका कोर्षहरु नेपालमै संचालन हुनुलाई मैले सकारात्मक रुपमा लिएको छ ु । त्यसरी नै अब नेपालमा पनि विद्यार्थीहरुलाई सिपयुक्त र प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्दै अघि बढेको खण्डमा नेपालको पढाई निकै नै उत्कृष्ठ छ भन्ने मलाई लाग्दछ । यही अष्ट्रेलियाकै ठूला–ठूला युनिभसिर्टीहरु समेत नेपाली विद्यार्थीले टप गरीरहेको हामीले सुन्दछौं । त्यसैले अव सरकारले प्राविधिक, ब्यवासीक र सिपयुक्त शिक्षा तर्फ जोड दिनु जरुरी छ ।
तपाई त एसोसिएसन अफ तराई ईन अष्ट्रेलीया एन्टाका उपाध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ ? नेपाली समुदाय र नेपालको लागि यस संस्थाले के–कस्ता कामहरु गर्रीरहेको छ ?
हो यहाँले भने जस्तै म अष्ट्रेलीयामा रहेको एसोसिएसन अफ तराई ईन अष्ट्रेलियाको उपाध्यक्ष हुँ । यो संस्था भनेको तराई मधेशका बिभिन्न जिल्लाहरुवाट अष्ट्रेलीया आएकाहरुको साझा चौतारी हो । हामीले एन्टा मार्फत बार्षिक रुपमा छठ, होली लगायतका बिभिन्न साँस्कृतिकपर्वहरु समुदायसँग मिलेर मनाउँदै आईरहेका छौं । त्यसरी नै हामीले आफ्नो देशको लागि केही गर्नु पर्छ भन्ने सोच बनाएर एन्टा मार्फत हरेक बर्ष तराई मधेशमा रहेका जेहेन्दार बिद्यार्थीहरुका लागि पाँच लाख रुपैंयाको छात्रबृती प्रदान गर्दै आईरहेका छौं । जुन छात्रबृती अन्र्तगत यस बर्ष जिवित शहीद सप्तरीका देवनारायण विश्वासका छोराले काठमाण्डौमा सिएको अध्ययन गरीरहेका छन् । त्यसरी नै हामीले बिभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा समेत एन्टा मार्फत र मैले ब्यक्तिगत तवरले समेत काम गरीरहेको छु ।
अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा रामा फ्यासिलिटि प्रालिले जे जसरी काम गरीरहेको छ , यसलाई नेपालसम्म पुर्याउने कुनै योजना छ त तपाईसँग ?
पक्कै पनि जनकजी, रामा फ्यासिलिटि म्यानेजम्यान्ट प्रालिले निकट भबिष्यमा नै काठमाण्डौमा एक गुणस्तरीय सेवा प्रदायक संस्था स्थापना गर्ने तयारी गरीरहेको छ । अन्तराष्ट्रिय सिपलाई नेपाली बजारसम्म पुर्याउने उद्धेश्य सहित रामा फ्यासिलिटि म्यानेजम्यान्ट प्रालिले नेपालमा पलम्बीङ्ग, ईलेक्ट्रीसियन, क्लिनिङ्ग लगायतका गुणस्तरीय सेवाहरु आम उपभोक्ता समक्ष पुर्याउने योजना सहित हामी अघि बढीरहेका छौं । म यहाँलाई जोड्न चाहन्छु, तपाईको घरमा धारा बिग्रियो पानी आएन, यदी तपाईले पलम्बर खोज्न जानुहुन्छ भने कहाँ पाउने, कुनै स्थायीत्व नै छैन र पाएको खण्डमा पनि मलाई फुर्सद छैन, यति दिनपछि आउनुस् भन्ने जवाफ आउँछ । त्यसैले हामीले संचालन गर्ने रामा फ्यासिलिटि म्यानेजम्यान्ट प्रालिले सबै सेवाहरु अनलाईन मार्फत निश्चित समयमा प्रदान गर्नकै लागि नयाँ सोच, नयाँ बिचार र अन्तराष्ट्रिय स्तरको सेवा दिने मनशाय सहित नेपालमा लगानी गर्न ईच्छुक रहेका छौं । छिट्टै तपाईहरुको सेवामा हाजीर हुने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछौं । धन्यवाद ।
म्यानचेस्टर युनाइटेडसँग हारेपछि स्तब्ध बनेका एमबाप्पे सुत्न नसकेको खुलासा
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आज अमेरिका जाँदै